२६.७९ अंकले बढ्यो परिसूचक, साताको अन्तिम दिन ११५५.५० विन्दुमा | गृहपृष्ठ
Home लगानी नेप्से विश्लेषण २६.७९ अंकले बढ्यो परिसूचक, साताको अन्तिम दिन ११५५.५० विन्दुमा
on: March 15, 2019 नेप्से विश्लेषण, मुख्य खबर, लगानी
२६.७९ अंकले बढ्यो परिसूचक, साताको अन्तिम दिन ११५५.५० विन्दुमा
चैत १, काठमाडौं (अस) । सातामा नेप्से परिसूचक २६ दशमलव ७९ अंकले बढेको छ । साताको शुरुको दिन फागुन २६ गते १ हजार १२८ दशमलव ७१ विन्दुमा बन्द भएको परिसूचक अन्तिम दिन फागुन ३० गते १ हजार १५५ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । सातामा ११ समूहको परिसूचकमा १० समूहको परिसूचक बढेसँगै समग्र नेप्से परिसूचक २ दशमलव ३७ प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो ।
गत साता फागुन २३ गते र यो साता फागुन ३० गतेको तुलनामा नेप्से परिसूचक २७ दशमलव ७३ प्रतिशतले बढ्न पुगेको हो । गत साताको अन्तिम दिन नेप्से १ हजार १२७ दशमलव ७७ विन्दुमा बन्द भएको थियो । गत सातामा जम्मा चार दिन कारोबार भएको थियो भने यो सातामा पाँच दिन शेयर कारोबार भएको थियो । आइतवार नेप्सेमा प्राविधिक समस्या भएकाले आधा दिन मात्र शेयर कारोबार भएको थियो । पाँच दिनको कारोबारमा फागुन २९ गते १३ दशमलव १६ अंकले परिसूचक घट्न पुगेको थियो भने बाँकी दिन परिसूचक बढेको थियो ।
यो साता ‘क’ वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ५ दशमलव ९९ अंकले बढ्न पुगेको छ । नेप्सेको ‘क’ वर्गको सेन्सेटिभ इण्डेक्स सबैभन्दा उच्च २४७ दशमलव ४७ विन्दुसम्म पुगेको थियो भने न्यून २४० दशमलव ११ विन्दुसम्म पुगेको थियो ।
यो साता रू. १ अर्ब ९३ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । गत साताको तुलनामा ९९ दशमलव ७७ प्रतिशतले कारोबारमा वृद्धि आएको हो । गत सातामा चार दिन शेयर कारोबार भएकाले कारोबार रकम बढ्न केहि सहयोग पुगेको हो । गत सातामा रू. ९७ करोड ९१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।
एक महीनामा ४ प्रतिशत बढ्यो बजार पूँजीकरण
फागुन २ गते र फागुन ३० गते अर्थात ( फेब्रअरी १४ र मार्च १४) को तुलनामा गर्दा बजार पूँजीकरण ४ दशमलव ११ प्रतिशतले बढेको छ । फागुन २ गते बजार पूँजीकरण रू. १३ खर्ब ८८ अर्व रहेको थियो भने फागुन ३० गते रू. १४ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । सोही अवधिमा नेप्से परिसूचक ४२ दशमलव ६३ अंकले बढेको छ । फागुन २ गते १ हजार ११२ दशमलव ८७ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक फागुन ३० गते १ हजार १५५ दशमलव ५० विन्दुमा पुगेको छ ।
शेयर बजार बढ्नुको कारण
बिहीवार नेपाल धितोपत्र बोर्डले रू. ५ लाखभन्दा बढीको शेयर कारोबारमा मात्र प्यान अनिर्वाय गर्ने सूचना दिएसँगै नेप्से पनि बढ्न पुगेको हो । लामो समयदेखि प्यानको विषयमा अलमलमा परिरहेका लगानीकर्ता धितोपत्रले ल्याएको सूचनालाई स्वीकारेका छन् ।
लामो समयदेखि शेयर बजार घटिरहदा प्राय सबै कम्पनीहरुको शेयर मूल्य पनि निकै तल आइसकेको थियो । केहि समयदेखि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरु सस्तो मूल्यमा शेयर उठाउँदा पनि बजार बढ्न पुगेको अनुमान गरिएको छ । अर्को ब्याजदर घट्ने संकेतले पनि लगानीकर्ताहरु शेयर बजारमा पस्न थालेका हुन भने सरकारले प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र हेज फण्डलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने कुराको पनि प्रभाव परेको हो ।
गत साताको तुलनामा यो साता उपसमूहमा आएको वृद्धि
सातामा सर्वाधिक शेयर कारोबार भएका १० कम्पनीहरु
साताका सर्वाधिक बजार पूँजीकरण
सातामा सूचिकृत भएका कम्पनीहरु
सातामा चार कम्पनीको ७५ लाख ६१ हजार ९ सय ६५ दशमलव ५ कित्ता शेयर सूचिकृत भएको छ । आशा लघुवित्तको आईपीओ सूचिकृत भएको छ भने जेबिल्स फाइनान्सको हकप्रद शेयर सूचिकृत भएको छ । डिवेन्चर सूचिकृत हुनेमा सिद्धार्थ बैंकको २१ लाख ६२ हजार ५ सय ५९ कित्ता,सानिमा बैंकको १३ लाख ५४ हजार ७ सय १२ कित्ता र आशा लघुवित्तको २० लाख ७४ हजार कित्ता आईपीओ सूचिकृत भएको छ । जेबिल्स फाइनान्सको १९ लाख ७० हजार ६ सय ९४ दशमलव ५ कित्ता हकप्रद शेयर सूचिकृत भएको हो ।
१.७१ अंक घट्यो नेप्से (१ बजेको अपडेट)
१२५५.३७ विन्दुमा पुगेको नेप्सेमा ५ करोडको कारोबार (१२ बजेको अपडेट)